स्वागतम् स्वागतम् पाहुनालाई: April 2010
Posted by www.bedanablog.com at 1:48 AM
Posted by www.bedanablog.com at 1:04 AM
Labels: One of the temple of Bashantapur Durbar suqare By bedana shrestha
के २०१२ मा पृथ्वीको अन्त होला त?
Google र you tube मा world ending 2012 खोज्नु भयो भने धेरै धेरै पोस्ट भेट्नु हुन्छ र तपाईंले विश्व अन्त हुने गजब गजबका कारण भेट्नु हुने छ। यसो हेर्दा लाग्छ ल! है साच्चैनै अन्त होला जस्तो लाग्छ।
ईन्टरनेटमा पढे अनुसार पृथ्वीकोको अन्त December 21 2012 मा हुनेछ। यो हल्लानै हल्लामा आधारित बनेको मुभिले पनि अष्ट्रेलियामा खुब तहल्का मच्चाइ रहेको छ। हलको टिकेट बूकिङ नगरि हेर्न नपाईने भएको छ। मान्छेहरु बडा चाख लिएर पैसा खर्च गरी गरी कसरी कस्तो प्रकारले आफ्नो अन्त होला भनेर फ्लिममै हेरेर भए पनि चित्त बुझाउने तिर लागेका छन्।
कोही कोही चाँही त्यो बेला केही चाँही पक्कै हुन्छ है भन्छन् भने, कोही चाँही ह्या~~ यो त बकम्फुसे कुरा हो। समय समयमा यस्ता कुरा आइ राख्छन र यो कुरामा खासै वास्ता राख्दैनन।
Mayan Calendar मा २००० बर्ष भन्दा बढीको क्यालेन्डर छ र हरेक समय र कालमा हुने तिथी मिती र आइ पर्ने घटनाको सहि सुचना दिने रहेछ। 2012 december 21 पछीको चाँही यो क्यालेन्डरमा डेट नभएकोले केही नराम्रो हुने अनुमान गरिएको रहेछ तर मलाई लाग्छ त्यसपछी झन राम्रो पो हुने हो कि? नेपालमा2बर्ष पछी सम्मको त क्यालेन्डर हुँदैन भने ति मान्छे महान हुन जसले २००० बर्षको तिथी मिती ग्रहण समय लाग्ने सबै अनुमान गरेर गए अब त्यो भन्दा बढी त त्यो गोलो चित्रमा अटाउनु पनि त पर्यो नि!!
अब मेरो बिचार बुझ्नु हुन्छ भने मलाई यो पृथ्वीको २०१२ मा अन्त होला भनेर सुन्य प्रतिसत पनि विश्वाश छैन। यदी अन्तनै हुने रहेछ भने पनि म यस्लाई सार्है सकारात्मक रुपले लिन्छु। यदी संसारकै अन्त हुनेछ भने सबै जना एकै चोटि मरिन्छ। आहा!! सबै स-परिवार एकै चोटि मरिन्छ। कोही कसैलाई एक अर्काको बिछोडमा गम हुने छैन। मान्छे जन्मे पछी मरण अवस्य हुन्छ। कोही अजर अमर अहिले सम्म छैन र यो नै अन्तिम सत्य हो। फेरी २०१२ सम्मनै बाचिन्छ भन्ने पनि त छैन नि भोली अथवा पर्सी नै पनि त सिलटिम्मुर खान सकिन्छ नि।
खासमा आज भोली मान्छेले आफु एकदिन मर्नु पर्छ भन्ने बिर्सेंको छ। दिनहु एक अर्काको खिचातानी , हत्या हिम्सा , अत्याचार बढ्दो छ। मान्छेले आफ्नो अन्तिम घडी सम्म पनि दुखी दुखीनै बिताएका हुन्छन्।
अस्ती म यहाँ channel7हेरेर बसेको थिए २०१२ फ्लिमको director को interview आइ रहेको थियो त्यस्मा सोधियो के २०१२ मा पृथ्वी अन्त होला? भन्दा हासेर google it भने । फेरी दोहोराएर interview लिने मान्छेले सोधे पनि उनको उत्तर भने I don’t know google it भनेर हासी हासी जवाफ दिए । जब फ्लिम बनाउने मान्छेलाईनै था' छैन भने अब अरुले फ्लिम हेरेर डराएर बस्नु त महा मुर्खता नै हो।
लौ पृथ्वीको अन्त नभए सँगै बाचौला, भए सँगै मरौला। बाचुन्जेल हासौ रमाऔ, राम्रो काम गरौ, अरुलाई सम्मान दिउ। 2013 january मा भेटेर खुशी खुशी सबै लाई शुभकामना बाडौ।
Posted by www.bedanablog.com at 12:00 AM
कोरोना भाइरस नेपाल: थप ११८ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि